चीन र म्यानमार : मित्र र छिमेकी – eratokhabar
चीन र म्यानमार : मित्र र छिमेकी
हउ रुइली लेखकका सबै लेख-रचना हेर्नुस्
ई-रातो खबर २०७४, ६ साउन शुक्रबार ०७:५५ July 21, 2017 1369 Views
चीन र म्यानमार जोडिएको २१०० किलोमिटरको अप्ठ्यारो सिमानामा बसोबास गरिरहेका जनताले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाएका छन् । तिनीहरू व्यापारबाहेक वैवाहिक सम्बन्धमा पनि बाँधिएका छन् । दाजुबहिनीसरि मिलेर बसेका छन् । तिनीहरू मित्र र नातेदार मात्र बनेका छैनन्, एउटै मन्त्र उच्चारण गर्दै गौतम बुद्धलाई सँगै पुज्ने गर्छन् । चाखलाग्दो कुरा त के छ भने सीमा क्षेत्रमा रहेका गाउँमा बस्ने मानिसहरू आधा चिनियाँ र आधा म्यानमारी छन् । उदाहरणका लागि यिनजिन (थ्ष्लवष्ल) गाउँमा एउटा इनार छ जहाँ दुवै देशका मानिसहरू पानी लिन आउँछन् तर एकआपसमा कहिल्यै विदेशीको रूपमा व्यवहार गर्दैनन् बरु साथीजस्तै ठान्छन् ।
युन्नान प्रान्त, रुइली सहरको थुनहोङ फेरीमा स्थानीय ‘ताइ परिवार’ को बारीमा सीमास्तम्भ निर्माण गर्दा “एक परिवार, दुई देश” को अनौठो अवस्था सिर्जना भएको थियो । चीन–म्यानमार सम्बन्धको इतिहास हेर्ने हो भने अहिलेको गतिविधिले यो विचारलाई दुई देशसम्म व्यापक फैलाएको देखाउँछ ।
हाल सुको भूगोलमा लेखिएको एक आलेखका अनुसार हान साम्राज्यको इतिहास सिचुवान र हुपेईजस्ता चीनको भित्री प्रदेशबाट व्यापारीहरूले भारत र म्यानमारसँग सिचुवान र युनान जोड्ने बाटो खोलेपछि चीन–म्यानमारको सम्बन्ध सुरु भएको थियो । म्यानमारीहरू यसलाई ‘स्वर्ग र चाँदी मार्ग’ भन्छन् । भारत, म्यानमार र अफगानिस्तानजस्ता मुलुकमा यही मार्ग भएर चिनियाँहरू रमी फेब्रिक, रेसम र चिनियाँ माटोका भाँडा व्यापार गर्थे ।
पूर्वी हान साम्राज्यको (२५–२२० ई.पू.) को समयदेखि नै म्यानमारका विभिन्न कबिलाका राजा चीनमा पटकपटक दूत पठाउँथे । युआन (१२७१– १३६८), मिङ (१३६८–१६४४) र छिङ (१६४४– १९११) साम्राज्यको समयमा परस्पर दूतहरू प्रायः आदानप्रदान हुन्थे । २ हजार वर्षदेखि विकास भएको प्रगाढ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धले म्यानमारीहरूले चिनियाँहरूलाई आफ्नै मित्र र नजिकको नातेदारका रूपमा लिएका छन् । आधुनिक समयमा चीन र म्यानमारका जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका लागि भएको लडाइँमा एकआपसमा सहयोग गरेका थिए । सन् १८८५ मा ब्रिटिस साम्राज्यले तेस्रो अङ्ग्रेज म्यानमार युद्धताका म्यानमारको अन्तिम शाही राजधानी ‘मानडेले’ कब्जा गरेका थिए । राजा थिबव मिनलाई देशनिकाला गरियो र भारतको एक प्रान्तका रूपमा म्यानमार ब्रिटिस शासनअन्तर्गत गयो । मेलेमा राजदरबार कब्जा गरिसकेपछि राजा थिबवका नातीले तुरुन्तै ब्रिटिस आक्रमणका विरुद्ध आफ्ना नागरिकलाई युद्धमा उता¥यो । यद्यपि ४ वर्षको लामो प्रतिरोधपछि पनि उनी असफल भए । बाँकी सेनासँगै चीनमा शरण लिए जहाँ उनले चिनियाँ जनताबाट सहयोग पाए । ८० वर्षभन्दा बढी बाँचेका युद्धका नायकले आफ्नो मृत्युपछि शवलाई चीनमै गाड्ने इच्छा व्यक्त गरे । उसको चिहान अहिले चीनको युन्नान प्रान्तको दहोङ ताई र चिङ पो स्वायत्त जिल्लाको याङ्सीमा छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा आफ्नो जीवन दाउमा राखी चीन र म्यानमारका जनता मिलेर तियनमियन राजमार्ग निर्माण गरेका थिए । जापानी आक्रमणविरुद्धको युद्धमा यो सडकलाई जीवनरेखाका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । अन्तर्र ाष्ट्रिय सहयोगलाई यही मार्गबाट युद्धरत क्षेत्रमा ढुवानी गरेर ठूलो सहयोग गरिन्थ्यो । सन् १९४२ जनवरीमा जापानी आक्रमणकारीले तियनमिङ राजमार्गलाई ध्वस्त पार्न म्यानमारमा हमला गरेका थिए । एक लाख चिनियाँ सेना जापानी आक्रमणविरुद्ध म्यानमारमा रक्तपातपूर्ण युद्धमा सामेल भएका थिए । उक्त युद्धमा साहदत प्राप्त गरेका ६० हजार सहिदलाई म्यानमारमै गाडिएको थियो । पश्चिमी युन्नान र म्यानमारको जापानविरुद्धको युद्धमा चीन र म्यानमारका जनता संयुक्त सेनासँग मिलेर जापानी आक्रमणकारीविरुद्ध लडेका थिए र अन्ततः जापानीलाई म्यानमारबाट भगाएर विजय प्राप्त गरेका थिए ।
चीन–म्यानमार सम्बन्धका लागि ठोस आधार
सन् १९५० जून ८ मा चीन र म्यानमारबीच औपचारिक रूपमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । सन् १९५० मा दुई देशले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको पाँच सिद्धान्तलाई मानेका थिए । अरू मुलुकका निम्ति पनि सीमा मुद्दाको समाधानका लागि उदाहरणीय बन्दै परस्पर समझदारी र मैत्रीपूर्ण सहयोग सिद्धान्तका आधारमा सन् १९६० ताका दुवै पक्ष ऐतिहासिक सीमा मुद्दा सल्ट्याउन सफल भएका थिए । लामो समयसम्म चीन र म्यानमार असल छिमेकी र मैत्री सम्बन्ध, स्थिर विकासलाई ध्यानमा राखेर द्विपक्षीय सम्बन्धका साथ अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मामलामा एकनासको सहयोग कायम गरिरहेको छ । चीन र म्यानमारका नेताहरूबीच हुने भ्रमण आदानप्रदान कायमै छ । चीन–म्यानमारको मित्रताको विशेषताालाई कायम राख्दै प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले म्यानमारको भ्रमण ९ पटक गरेका थिए भने उ नी वीन (म्यानमारका तत्कालीन प्रम. सं.) ले १२ पटक चीनको भ्रमण गरेका थिए । सुधार र खुलापन लागू भएदेखि चीन र म्यानमारबीच राजनीति, अर्थतन्त्र, संस्कृति, धर्म, लागूपदार्थविरुद्धको अभियानजस्ता क्षेत्रमा उच्च तहको सर्वपक्षीय आदानप्रदान र सहयोग भइरहेको छ ।
सन् १९८० अप्रिलमा रेल र सडकमार्ग भएको दक्षिणपूर्वी एसियाको सबैभन्दा ठूलो थानलिन पुल निर्माणमा सहयोग गर्न चीन सरकार तयार भएको थियो । ७ वर्षको निर्माणपछि सन् १९९३ मा यातायातका लागि खुला गरिएको थियो । चीन–म्यानमारको इतिहासमा यो परियोजनालाई कोसेढुङ्गाका रूपमा लिइएको थियो । सन् २००१ डिसेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति चियाङ चमिनले म्यानमारको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । यस अवसरलाई उच्च तहको चिनियाँ नेताको पहिलो म्यानमार भ्रमणका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । दुवै पक्षले कृषि, मानव संसाधन, स्रोत विकासलाई सहयोग क्षेत्रका रूपमा छुट्ट्याएको र सान्दर्भिक सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । नयाँ शताब्दीमा चीन र म्यानमारबीचको परस्परागत सम्बन्ध र मित्रतालाई यस भ्रमणले अझ बलियो र अग्रगामी बनाएको छ ।
सन् २०११ मा चीन र म्यानमारले विस्तृत रणनीतिक सहयोग साझेदारी स्थापना गरे । दुवै पक्ष संयुक्त विज्ञप्तिमा चरणबद्ध सम्झौतामा पुगेका छन् । दुवै पक्षले उच्च तहको सम्पर्कलाई कायम राख्नेछ, रणनीतिक परस्पर विश्वासलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ, अन्तर्र ाष्ट्रिय र क्षेत्रीय मुद्दामाथि विचार आदानप्रदान गर्नेछ, आर्थिक सहयोगको दरलाई बढाउने र विभिन्न क्षेत्रमा मैत्रीपूर्ण सहयोग गर्नेछ ।
सन् २०१३ अप्रिलमा म्यानमारी राष्ट्रपति उ थान सेनले चीनको राजकीय भ्रमणको समयमा बोआओ फोरममा भाग लिएका थिए । उ थानले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ४ वर्षअघि गरेको चीनको भ्रमणसँग तुलना गर्दा अहिले राष्ट्रपतिका रूपमा गरेको भ्रमण धेरै अर्थपूर्ण थियो । त्यस समयमा म्यानमार पश्चिमेली नाकाबन्दी सामना गरिरहेको थियो तर अहिले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका गतिविधि भएका छन् ।
एसियाका लागि बोआओ फोरमको समयमा पुरानो मित्रता घोषणा गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरियो । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि दुई देशका जनताको हित हुने गरी चीन र म्यानमारले परस्पर सम्मान र समानताका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्धको विकास प्रवद्र्धन गरेका छन् ।
म्यानमारमा अवस्थित एनजीओ ‘मिन्गलर’ का डा. फोन विनका अनुसार राष्ट्रपति उ थानको बारम्बारको चीन भ्रमणले चीन–म्यानमार सम्बन्धको महत्व दर्साउँछ । हालसालै म्यानमारले छिमेकी राष्ट्र र ठूला राष्ट्रसँग सम्बन्धलाई विकास गर्न स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । चीन ठूलो र छिमेकी दुवै हो । त्यसैले चीन– म्यानमार सम्बन्धलाई विकास गर्न म्यानमारका लागि आवश्यकता प्रस्ट छ । चीनले तीन दशक लामो सुधार र खुला नीतिको प्रतिफल प्राप्त गर्दैछ जसले चीनले लिँदै आएको नीति ठीक रहेको देखाउँछ । चीनबाट सिक्नकै लागि उ थान पटकपटक चीन भ्रमण गर्छन् । दुर्गम ठाउँको अवस्थामा सुधार ल्याउनका निम्ति म्यानमारले काम गरिरहेको छ र यस मामिलामा चीनसँग ठूलो अनुभव छ ।
व्यापार र आर्थिक सहयोगबाट परस्पर हित
आज चीन म्यानमारको ठूलो व्यापार साझेदार हो । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१३ को पहिलो ६ महिनामा चीन र म्यानमारको व्यापार ४ दशमलव ३८ अरब अमेरिकी डलर पुगेको छ जुन २५ दशमलव ९ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो ।
डा. विनका अनुसार अर्थशास्त्रको हिसाबले चीन म्यानमारका लागि छुट्ट्याउनै नसकिने बजार हो । चीनमा म्यानमारको निर्यात भनेको काठ र कृषि उत्पादन नै प्रमुख छ । उनी आशावादी छन्, ‘म्यानमार उत्पादन क्षमतालाई बढाउन सक्छ र भविष्यमा अतिरिक्त मूल्यका साथ निर्यातलाई बढाउन सक्छ ।’ लगानीको सन्दर्भमा चीन म्यानमारको सबभन्दा ठूलो लगानीकर्ता भएको छ । हालै मात्र चीनले वैदेशिक मुद्राको ठूलो सञ्चिती गरेको छ जब कि म्यानमारलाई पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीको अभाव छ । त्यसैले आर्थिक शक्ति चिनियाँ उद्यमीले म्यानमारमा यातायात, ऊर्जा र जलविद्युत् विकासका क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने दुवै पक्षको हित हुनेछ ।
चीन र म्यानमारबीच हस्ताक्षर भएका आर्थिक सम्झौताको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सन् १९७१ मा दुई देशबीच अति सौविध्य प्राप्त राष्ट्रसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन् १९९४ मा सीमा व्यापारमाथि समझदारीपत्रमा दुई देशले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन. १९९७ मा आर्थिक, व्यापारिक र प्राविधिक संयुक्त कार्यदल स्थापनामा सम्झौता भएको थियो र सन् २००१ मा दुई मुलुकका सरकारले लगानी उत्प्रेरणा, प्रवद्र्धन र संरक्षण सम्झौतामा हस्ताक्षर ग¥यो । सन् २०११ मा विस्तृत रणनीतिक साझेदारीको स्थापनासँगै आर्थिक र प्रविधि सहयोग, प्राथमिकता ऋण र पूर्वाधार निर्माणजस्ता क्षेत्रमा दुई देशबीच धेरै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
हालसालैको वर्षमा अति उच्च प्रविधि र उपकरण प्रदान गरेर म्यानमारको आर्थिक निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी सक्रिय भएर लागिरहेका छन् । डिजेल इन्जिन प्लान्ट, टायर उद्योग, कपडा उद्योगजस्ता परियोजनाले प्रतिफल दिन सुरु गरेका छन् । चिनियाँ कम्पनी संलग्न भएका म्यानमारका जलविद्युत् परियोजनाले ऊर्जा अभावलाई सजिलो बनाएको छ । इरावती नदीमाथि बनेको पुलले स्थानीय यातायातलाई सहयोग पु¥याएको छ र स्थानीय आर्थिक व्यापारलाई माथि उठाएको छ । म्यानमारमा लगानीको प्रक्रियामा चिनियाँ पक्षले व्यापारिक सामाजिक उत्तरदायित्व र वातावरणीय संरक्षणलाई विशेष ध्यान दिएको छ ।
चीन–म्यानमार तेल र प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन सुरु भएको ठाउँ क्याउकफ्युमा परियोजनामा जिम्मेवार चीन राष्ट्रिय आयल निगमले ६ लाख ५० हजार क्युबिक मिटर क्षमताको भण्डारण निर्माण गरेको छ र नजिकैका तीनवटा गाउँमा पानीको आपूर्ति भएको छ । यसैबीच चीन राष्ट्रिय आयल निगमले पाइपलाइन बिछ्याएको ठाउँमा दुईटा माध्यमिक विद्यालय र ६ वटा प्राथमिक विद्यालय स्थापना गर्न १३ लाख डलर चन्दा प्रदान गरेको छ । यसका अतिरिक्त चीन राष्ट्रिय आयल निगमले स्थानीय अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि ६० लाख डलर लगानी गरेको छ । मिस्टोन ड्याम परियोजनाका लागि ‘चीन ऊर्जा लगानी निगम’ जिम्मेवार छ । कुल २ करोड ५० लाख डलरमध्ये १ करोड ८० लाख डलर स्थानीय बासिन्दालाई पुनर्वासका लागि खर्च गरियो । चीन ऊर्जा लगानी निगमअन्तर्गत निर्माण भएको पुनर्वास गाउँमध्ये एक आङ मिन थार स्थानीय दुर्गम क्षेत्रमा एउटा सफल उदाहरण भएको छ जहाँ विद्यालय, मन्दिर, चर्च र अस्पताल निर्माण भएको छ । म्यानमार सरकारको आवश्यकताअनुसार चीन ऊर्जा लगानी निगमले विश्व बैङ्क र एसियाली बैङ्कको प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्याङ्कनलाई अवलम्बन गरेको छ र पर्यावरणीय र प्राकृतिक संरक्षण सङ्घको विश्वास लिएको छ । याङ्सी नदी डिजाइन कम्पनीले मिस्टोन ड्याममा वातावरणीय मूल्याङ्कन गरेको छ ।
चीन र म्यानमारका एक सयभन्दा बढी विज्ञ सामेल भएका टोली नदीकिनार क्षेत्रको वातावरणमा परियोजनाको असरलाई मूल्याङ्कन गर्ने काम गरेर परियोजना उपयुक्त भएको निष्कर्षमा पुगे । वास्तवमा पाइपलाइनको प्रक्रियामा वातावरणीय संरक्षण सुनिश्चित गर्न विज्ञ पर्यवेक्षकलाई बोलाइएको थियो । कच्चा तेल बन्दरगाह निर्माणको समयमा चीन राष्ट्रिय आयल निगमले नियम कडाइका साथ पालना गरेको थियो । ती क्षेत्रमा ढुङ्गा, माटो र रूख मात्र प्राप्त गर्न सक्छ । इरावती नदी किनारामा तागाङ ताउ निकेल खानीको निर्माण गर्दा चिनियाँ कम्पनीले उच्चस्तरको धुलो सङ्कलन प्रविधि जडान गर्न २४ करोड चिनियाँ मुद्रा लगानी गरेको थियो ।
सम्पन्न सांस्कृतिक आदानप्रदान
ऐतिहासिक अभिलेखका अनुसार चीन र म्यानमारबीच सांस्कृतिक आदानप्रदान हान साम्राज्यको पालादेखि नै भएको देखिन्छ । थाङ साम्राज्यको समयमा प्यु राज्यका राजकुमारले सङ्गीत समूहको नेतृत्व गर्दै चीनको प्राचीन राजधानी छाङआनको भ्रमण गरेका थिए ।
कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि सांस्कृतिक आदानप्रदान निकैपटक भएको छ । सन् १९६० मा चिनियाँ राष्ट्रिय दिवसमा म्यानमारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री उ नुले सांस्कृतिक, कला, सिनेमा क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका ४०० भन्दा बढी सदस्यसहितको टोलीलाई नेतृत्व गर्दै चीन भ्रमण गरेका थिए र पेइचिङमा म्यानमार सांस्कृतिक सप्ताहान्त मनाएका थिए । त्यसको प्रत्युत्तरमा सन् १९६१ जनवरीमा म्यानमार स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा संस्कृति, कला, सिनेमा क्षेत्रका ५३० भन्दा बढी सदस्यसहितको सांस्कृतिक टोलीलाई नेतृत्व गर्दै चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले म्यानमारको भ्रमण गरेका थिए र याङ्उनमा चिनियाँ सांस्कृतिक सप्ताह मनाएका थिए । सन् १९८० देखि दुई राष्ट्रबीच १३ पटक मन्त्रीस्तरीय भ्रमणसहित पटकपटक उच्च तहको भ्रमण आदानप्रदान भएका छन् । सन् १९९६ जनवरीमा चीन र म्यानमारका संस्कृतिमन्त्रीले सांस्कृतिक सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
चीन–म्यानमार सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै जाँदा दुई मुलुक कला, साहित्य, सिनेमा, पत्रकारिता, शिक्षा, धर्म, पुरातात्विक र पुस्तक प्रकाशनमा घनिष्ठ सहयोग र आदानप्रदानमा वृद्धि भएको स्पष्ट देखिन्छ । तथ्याङ्कले देखाउँछ, कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि दुई देशबीचको भ्रमण आदानप्रदानको सङ्ख्या ६ सय नाघेको छ । सार्वजनिक प्रदर्शनीका लागि बुद्धको दन्त, चीनको राष्ट्रिय सांस्कृतिक टोली म्यानमारमा ४ पटक पठाइसकेको छ र म्यानमारको सरकार र समाजबाट न्यानो अभिवादन प्राप्त भएको छ । सांस्कृतिक सम्बन्धको सूची बढ्दै जाँदा सन् १९९८ देखि म्यानमार कला समूहले चिनियाँ सांस्कृतिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको एसियाली कला उत्सवमा नियमित रूपले प्रदर्शन गरिरहेको छ । सन् २००४ मा शैक्षिक सहयोग समझदारीपत्रमा चीन र म्यानमारले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २००५ जुनमा यान्गुनमा चिनियाँ सांस्कृतिक सप्ताह सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । सन् २०११ र २०१२ मा चिनियाँ अपाङ्ग जनप्रदर्शन कला समूह र कलाबाजी समूहले म्यानमारमा प्रतिभा मञ्चन गरेका थिए र सन् २०१२ मेमा चीन–म्यानमार मित्रतालाई संस्थागत गर्ने प्रयासस्वरूप पहिलो चीन–म्यानमार भाइचारा मित्रता क्रियाकलापको अन्तर्राष्ट्रिय आदानप्रदानका लागि चीन गैरसरकारी सङ्घ, विकास र शान्तिका लागि चिनियाँ कोषद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना ग¥यो ।
डा. विनका अनुसार म्यानमारी जनता पश्चिमेली राष्ट्रले अपनाएको केही अवधारणा स्वीकार्न सक्दैनन् किनभने म्यानमारमा बुद्धको दर्शनले जरो गाडेर बसेको छ । यो सन्दर्भमा पश्चिमेलीभन्दा चीन निपुण देखिन्छ । त्यसैले दुई देशको साझा सांस्कृतिक मूल्य र मान्यतासँगै सहयोगलाई सफतापूर्वक बढाउँदै लानेमा कुनै शङ्का छैन ।
China and Myanmar : Friends and Neighbours
Vol.63, no.4, April 2014
वडाध्यक्षबाट दलित कुटिए
पहिरोमा परि ४ वर्षीया बालिको मृत्यु
अखिल क्रान्तिकारीद्वारा नेपाल–भारत सिमानामा काँडेतार लगाउन आह्वान, शैक्षिक माफियालाई कारबाही गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक
दलाल पुँजीवाद रहेसम्म शिक्षा र स्वास्थ्यको समस्या पनि जारी रहन्छ : कञ्चन
दोलखा बस दुर्घटनाका घाइतेको अविलम्ब उपचार गराउन नेकपा (बहुमत) को माग
युवा जनस्वयम्सेवकको विशेष राष्ट्रिय भेलाको तयारी पूरा, पर्सिदेखि सुरु हुँदै
नेकपा (बहुमत) द्वारा सहिदपिता प्रह्लादप्रति श्रद्धाञ्जली, निधनपछि सल्लाहकारको सम्मान
प्रस्तावित नागरिकता विधेयकका भित्री नियत र सम्भावित गम्भीर परिणाम